Bishaan horiin dhiitan dhugaa turre, sanuu dhabne - buqqaatota Baalee jiran - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Buqqaatonni godina Baalee keessa qubatanii jiran rakkoolee hedduu keessa jiru
Rakkoo nageenyaa fi lola daangaa naannoo Somaalee dheessuun lammiileen qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqa'anii godina Baalee keessa jiran hanqina bishaan dhugaatii, nyaata fi xiyyeeffannaa dhabuun rakkachaa jirra jedhan.
Baatii shan dura qabeenya qaban hunda dhiisani naannoo Somaalee bakka Haroo Dibbee irraa gara godina Baalee aanaa Gurraa Dhaamoleetti baqachuu kan himan manguddoo sheeh Ahmad Iyya uummanni fi mootummaan gargaarsa gosa garaa garaa nuu godhanis hanqinoota heddu qabna jedhu.
Akka buqqaatota naannolee biroo jiranii kaampii itti qubatan ille kan hin qabneefii gammoojiii baalee keessa sharaa gargaarsaan mootummaa naannoo Oromiyaa fi lammiin lammiif irraa argatan keessa jiraachaa akka jiraniifi innuu akka wal hin geenye dubbatu.
''Tokkoffaa hanqinni nuti qabnu kan mana jireenyaati, muka jala bulaa jirra. Huccuu uffannee bullu hin qabnu, waarri fannoo diimaa uffata qorraa nuu fidanii ture garuu hundaaf hin geenye," jedhu.
"Tajaajila fayyaa argachaa hin jirru baasaa fi haqqeen miidhama guddoo nurraan gahe, hanqinni nyataa fi bishaan dhugaatiis guddoo ni miidheera'' jedhu sheeh Ahmad.
Buqqaatonni kuma 16 ol ta'an kan keessa qubatan gandi Addeelle aanaa Laga hidhaa bilbila dabalatee tajaajilli bu'uraa biroon hanqina guddaa kan qaban ta'uu, magaalaa guddoo aanichaa kan taate Beeltoo kan jiraatani Obbo Igguu Yaayyaa BBC'tti himaniiru.
"Hanqinni bishaanii hamaa fi gargaarsa midhaan nyaataa dhabuu naannoo buqqaatonni kunniin qubatanii jiranitti mudate, rakkoolee hawaasummaa biroo itti dabalamuun buqqaatota rakkoo hamaaf saaxilaa jira," jedhu.
Addee Fadiyaan qee'eefii qabeenya waggoota 19 naannoo Somaalee keessatti horatanii turan dhiisanii lubbuu oolfachuuf da'ima ji'a 10 fi da'imman biroo qabatanii gara aanaa Gurraa Dhaamolee akka dhufan dubbatu.
''Daa'ima ji'a 10, kan waggaa sadii, afurii fi jahaan qaba, bakka nu qubachiisan irraa gara magaalaatti miilaan imaleen mana namaafaa dalagaa daraaraadhaan da'imman koo guddisuuf yaalaa jira,'' jedhu.
Gargaarsi qorichaa fi waldhaansi fayyaa bilisaa kutaalee hawaasaa nannoo biraatii darbee darbee dhufaniin nuu kennamee kan ture ta'us da'immanii fi maanguddoon dhibeewwan daddarboofi kanneen biroon salphaatti miidhamaa akka jiranis dubbatu.
''Bishaan Horii fi bineensonni biroon dhiitan dhugna, isayyuu amma dhabnee rakkoo guddoo keessa jirra,'' jedhu Sheeh Ahmad.
"Hanqina nyaataan namni beela'e hin jiru"
Erga buqqaatonni naannoo Somalee irraa gara godina baalee dhufanii as gargaarsii gosa garaagaraa mootummaa fi qaamolee hawaasaatiin taasifamaa jira jedhu hoogganaan waajjira ittisa balaa fi qophaa'inaa godina Baalee obbo Abrahaam Hayilu.
Rakkooleen buqqaatonni kunniin himatan tokko tokko jiraachuus hin haalle.
''Dhugaan jiru duraanuu gammoojji keessa waan jiraniif bishaan ilaachisee rakkoo guddaatu mul'ata," jedhu.
Aanaa tokkotti boottee tokkofaatu jira kuni gahaa waan hin taaneef boottee 52 akka nuuf dhiyeessu biroo Bishanii, Albuudaa fi Inarjii Oromiyaa gaafannee yeroo dhiyootti isin biraan genya jedhamneerra jedhan Obbo Abrahaam.
Haa ta'u malee "hanqina nyaataan namni beela'aa jiru hin jiru," hin jiru jedhu Obbo Abrahaam.
''Hojiidhuma gargaarsaa kana qindeessuuf aanaalee buqqaatonni keessa qubatan irra nanna'eera ammatti namni sababa nyaata dhabuutiin lubbuun isaa balaarra bu'e hin jiru, kan isaan nutti himan gargaarsi keessan itti haa fufu kan jedhu ture," jedhu.
''Haala jiruufi deeggarsa godhamaa jiru akka nama tokkootti gaafan ilaalu beelaan namni miidhamaa jira dubbiin jedhu sirrii mitis'' jedhu.
"Namoota naannoo somaaleerraa qee'ee fi qabeenya isaanirraa buqqa'aanii waan dhufaniif, homaa waan harkaa hin qabneef wal'aansa fayyaa dabalatee fedhiiwwan bu'uuraa guutachuuf haala rakkisaa keessa jiruuchuun sirri dha, walumaagalatti deeggarsi asitti kennemaa jiru deeggarsa lubbuu baraaruuti'' jedho Obbo Abrahaam.
Walitti qabaan koree gargaarsaa fi deebisanii dhaabuu buqqaatotaa Dr. Abarraa Dheressaas ''ani hangan beekutti deeggersi nyaataafi gosa biroo geeffamaa jira," jedhu.
"Raashinni torbee lama lamaan ni geeffama haata'u malee lakkoofsi buqqaatootaa guddaa waan ta'eefi bifa bittinnaa'een waan jiraniif rakkoon kun jiraachuu hin danda'u jechuun rakkisaadha,'' jedhan.
Akka ragaan waajjira ittisa Balaa fi Qophaa'inaa Godina Baalee mul'isutti walumaagalatti namoonni 111,494 ta'an aanaalee godinichaa saddeet keessa qubatanii argamu.
Kanneen keessaa kuma 64 ol kan ta'an warreen naannoo Somaaleerraa baqatanii dhufan yommuu ta'an, kuma 44 ol kan ta'an ammoo naannoodhuma daangaa Oromiyaa keessaa lola humnoota somaalee baqachuun qe'eessanirraa buqa'anii warra naannoo daangaarraa siiqaniidha.
Aanaaleen gammoojjii godina Baalee akka Laga hidhaa, Sawweenaa, Gurraa Dhaamolee, Barraaq, Raayituu, Daawwee Sarar fi Daawwee Qaachan bakka buqqaatonni kunniin hedduminaan keessa qubatanii jiraniidha.
Laakkoofsi buqqaatotaa guddaa ta'uu fi bakka tokkotti haalli itti qubatan jiraachuu dhabus, deeggarsi nyaataa fi gosa garaa garaa kutaalee Oromiyaa akka shaashamannee, Burraayyuu, Dheeraa fi kanneen biroo irraa gara aanaalee saddeetitti wayita adda addaatti geeffamee jira.